Ukudla Okungeziweyo Kwezimbuzi
Imbuzi ithola izakhi eziningi ekudleni futhi idinga ukuchitha amahora angu-6 kuya kwangu-8 ngosuku lokudla (ukudla utshani) nokuphequlula (ukudla amaqabunga).
Ukondla kwezimbuzi zakho kufanele kugxile ekulawuleni okufanelekile ukuze izakhi ezidingekayo izilwane ingahlangana nokudla okusemhlabeni ngangokunokwenzeka.
Uma izinga lokudla liyancipha ngenkathi eyomile umlimi kudingeka afake ukudla okwengeziwe. Ukudla okungeziweyo akuyithathi indawo yokudla kwemvelo, kuvele kugcwalise ukusweleka.
Ukudla okungokwemvelo yindleko ezishibhile zezimbuzi kanye nezindleko zokukhiqiza ziyokhuphuka ngokudla okungeziwe, kepha ukudla okungeziwe kubaluleke kakhulu uma izimbuzi zikhulelwe. Izidingo zokudla ze-kapater (izinyane lembuzi elitheniwe) noma izimbuzi ezomile zifana nalokho, kepha ngokukhipha imfuyo izidingo zomsoco wezimbuzi ziyokhula ngamaphesenti angu-50%. (Ukudla okungeziweyo kwama-kapaters kuzokukhokha kuphela ngesikhathi sokusalela, noma ukugodla ukuhlatshwa.)
Ukondla okungeziwe kufanele kufaka phakathi okungenani izinhlobo ezine zokutshala ukuze kuqinisekiswe ukudla okulinganiselayo. Ngaphezu kwalokho, izilwane zidinga kokubili amandla namaprotheni. Ngenxa yalokhu, ama-boreme (cowpeas, alfalfa) aphezulu amaprotheni kanye namandla.Ifoliji egcinwe (kufanele igcinwe iwomile ukuwuvimbela ukuba ingabi ngumbumba) ungadliwa ukunikeza ukudla ngenkathi eyomile.
Gxilisa ama-feeds, sebenzisa cishe u-400 g ngosuku ngosuku lwesikhumba somuntu omdala ongakhulelwe, anganikezwa njengesengezo. Ukuxuba izinhlobo ezimbili kuya kwezingu-3 zokugxila kuzokuqinisekisa ukulinganisela kwamandla kanye namaprotheni. I-spoon of usawoti kanye ne-mineral-and-vitamin mix ingafakwa ukuze kuqinisekiswe izidingo zamavithamini namaminerali.
Ukudla okuphezulu kwamandla kukhona ummbila, ibhali, ama-grains kanye namafutha wekhekhe.
Ukondla kakhulu amaprotheni kufaka hlangana inhlanzi, ukudla kwesoya sosa, i-fatty cottonseed cake ikhekhe kanye namaqabunga wokuhlambalaza. (Izinhlamvu ze-Brewer yizinsalela zezinhlamvu ezivutshiwe ezisetshenziselwa ukwenza ubhiya.)
Ukuze unikeze umthombo omuhle we-nitrogen namandla ezimbuzi, unikeze i-urea-molasses block ukuze ukhokhe. Lokhu kuzobasiza futhi ukuba bagwebe umanyolo kangcono, ikakhulukazi ngenkathi eyomile. Gcina ku-container evulekile, phansi, ngakho-ke zonke izimbuzi zingazikhokha uma zithanda.
Amanzi ahlanzekile kufanele atholakale ngaso sonke isikhathi noma anikezwe okungenani izikhathi ezine ngosuku futhi izimbiza zamanzi kufanele zihlanzwe njalo futhi zibe mahhala.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngokusondeza izimbuzi zakho xhumana nochwepheshe wezempilo wezilwane, umhlinzeki wezilwane noma ohlinzeka ngesilwane.